भेडे खुर्सानी सेवन गर्नाले हामीलाई यस्ताे फाइदा गर्छ जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
भेडे खुर्सानीकाे औषधीय गुण के हाे ?
भेडे खुर्सानीमा के के पाइन्छ ?
भेडे खुर्सानीकाे प्रयाेग कसरी गरिन्छ ?
जानौं भेडे खुर्सानीका फाइदाहरू
मेटाबोलिज्म बढाउनमा मद्दत गर्छ
तौल घटाउने सोच भएकाहरूका लागि भेडे खुर्सानीको सेवन निकै लाभदायक हुन्छ । यसमा क्यालोरी नगन्य मात्रामा हुन्छ जसले तौल घटाउनमा मद्दत गर्छ । यसले मेटाबोलिज्मको प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ ।
एन्टी अक्सीडेन्ट गुण
भिटामिन ए र सीले भरिपूर्ण भेडे खुर्सानी एन्टी अक्सीडेन्ट्सको राम्रो स्रो पनि हो । साथै मुटुसँग सम्बन्धित रोग, दम र मोतियाविन्दुबाट पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ ।
भेडे खुर्सानीको सेवनबाट क्यान्सरको कोषलाई विकसित हुन दिदैँन । भेडे खुर्सानीको प्रयोग दिनहुँ कुनै न कुनै रुपले गर्नुपर्छ । भेडे खुर्सानीको सेवनले क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
भेडे खुर्सानीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले छालाको दुखाईलाई स्पाइनल कोड सम्म जान दिदैँन । साथै यसमा पाइने तत्व प्राकृतिक पेनकिलर समान काम गर्छ ।
भिटामिन सी ले भरिपूर्ण भेडे खुर्सानीले संक्रामक रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । साथै शरीरमा रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्न पनि भेडे खुर्सानी उपयोगी हुन्छ । भेडे खुर्सानीको नियमित सेवनले फोक्सोको इनफेक्शन, दम जस्ता समस्यामा पनि राहत मिल्छ ।
हरियो खुर्सानी खानुहोस् र धेरै रोगहरुबाट बच्नुहोस्
हरियो खुर्सानी खाँदा हुने ७ वटा फाइदाबारे जानकारी लिऔं
हरियो खुसार्नीमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टका कारण ओक्साइडेसनलाई कम गर्छ । जसले कोषिकाहरूलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ।
प्रत्येक व्यक्तिको रक्तसञ्चार फरक-फरक गतिमा हुन्छ । रगतले सम्पूर्ण शरीरमा पोषक तत्व, अक्सिजन, हर्मोन, गर्मी, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि पुराउने गर्छ। हरियो खुर्सानी खाँदा रक्तसञ्चारलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्छ ।
हरियो खुर्सानीको अचार
हरियो खुर्सानी : ३० वटा
आधा चम्चा : बेसार
आधा चम्चा : आधा चम्चा हिंग
आधा चम्चा : सौफ
एक ठूलो चम्चा कागतीको रस
सबैभन्दा पहिले हरियो खुर्सानीलाई पखालेर ओभानो बनाउने । हरियो खुर्सानीलाई दुई चीरा पर्ने गरी काट्ने । तर खुर्सानीलाई अलग भने गर्नु हुँदैन । त्यसपछि एउटा भाँडोमा माथिका सबै मसला मिसाएर राख्ने । तयार पारिएको मिश्रणलाई खुर्सानीसँगै मिसाउने।खुर्सानीको भित्र पुग्नेगरी मसला मोस्ने । सबै मसला खुर्सानीसँग मोसिसकेपछि त्यसमा कागतीको रस राख्ने ।
अन्त्यमा खुर्सानीलाई तेलले झान्ने। यसरी तयार गरिएको खुर्सानीको अचार एक घण्टासम्म नचलाइन राख्ने । त्यसपछि एउटा शिशाको बट्टामा हावा नछिर्नेगरी राख्ने । एक दुई दिनपछि अचार खान सकिन्छ ।
हरीयो खुर्सानी खानाले स्वास्थ्य सम्बन्धि धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । हरीयो खुर्सानीको फाइदा बारेमा थाहा पाउनुहोस्
आँखा र छालाको लागि लाभकारी
छालाको संक्रमण रोक्न
Don't Miss it यी हुन् पाचन प्रक्रिया गडबडी भएमा प्रयोग गर्ने खाद्यपदार्थ
Up Next यी सामान्य गल्तीहरुले सधै भान्सामा प्रयोग हुने तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ